Travel World: November 2011
ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ဘေးရှိ စက်မှု(၁) ရုံးဟောင်းအား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဟိုတယ်အဖြစ် တည်ဆောက်မည်
ရန်ကုန်မြို့၊ စက်မှု(၁)လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းထောင့်ရှိ အမှတ်(၁)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းအား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များက
ဟိုတယ်တည်ဆောက်ကာ မြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး မူအားဖြင့် သဘောတူပြီး
ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌
နိုင်ငံခြားခရီးသွားများစွာ ၀င်ရောက်လာမှုကြောင့် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊
မန္တလေး၊ ပုဂံညောင်ဦးတို့ရှိ ဟိုတယ်များမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစာ
ဧည့်သည်ပြည့်နေသည့် အနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်များမှစကာ ၂၀၁၅
ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ၀င်ရောက်မည့်
အနေအထားမှာလည်း အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်လာမည့် အနေအထားဖြစ်၍
ဟိုတယ်လိုအပ်ချက်မှာ မြင့်မားလျှက် ရှိနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထို့အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင် မြှုပ်နှံလိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ ကမ်းလှမ်းထားသည့် ဂျပန်၊ မလေးရှား၊
စင်ကာပူ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း
သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ကိုက်ညီပါက အားလုံးခွင့်ပြုပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းအပြင် လက်ရှိ ဆောက်လက်စ ဟိုတယ်များကိုလည်း အမြန်ဆုံး အပြီးသတ်ရန်
လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များ
မြှုပ်နှံလိုပါကလည်း ယခု လာလျှောက်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက် ကိုက်ညီသည်နှင့်
ချက်ခြင်းပြန်လည် ချထားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ သို့သော်
ပုဂံဒေသအတွင်း၌မူ နောက်ထပ် ဟိုတယ်သစ်များ လုံးဝထပ်မံ တည်ဆောက်ခွင့်
မပြုတော့သည့်အပေါ် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက "ပုဂံမှာတော့
ဟိုတယ်ထပ်ဆောက်ခွင့် မပြုတော့ဘူး။ လွတ်ကင်းတဲ့ ဥပမာ- တုရွင်းတောင်လို
အစွန်လောက်နားမှာပဲ ခွင့်ပြုပေးတော့မယ်" ဟုလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ကြောင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင်
Posted by Travel at 11:34 PM0comments
QA Automation Engineer***MUST have TFS and automation experience!!
Position #3: QA Automation Engineer
Duration: 6~8 weeks contract
MUST have TFS and automation experience!!
MUST be able to write test scripts
Test Automation w/in TFS
SoftTech Partners Corporation
121 Fairfield Way Suite 106
(FULL TIME) SAP FI/GL Program Manager in newjersey,NJ
MUST HAVE Financial Services or Investment Banking exp.
Client will pay relocation and cover sponsorship, if needed.
Full time position in Jersey City NJ.
Salary @ $175k. client will requests salary statements for the past3yrs.
Experience / Exposure (Recommended):
Extensive experience in an IT financial general ledger leadership/manager role (10 or more years)
Subject matter expert in general ledger in the financial services industry
IT Leadership experience in one or more large scale global general ledger implementations of SAP or Oracle
Extensive experience in managing IT applications/projects (10 or more years)
Strong group consolidation and regulatory reporting experience
Superior communication, analysis/problem solving & stakeholder management skills
The Program Manager for Finance IT is responsible for managing all aspects general ledger, group consolidation, and regulatory reporting IT programs. Programs consist of complex information technology project or multiple, medium-scale IT projects from original concept through final implementation and has overall responsibil ity for ensuring on-time and on-budget delivery of new and enhanced business capabilities.
The Program Manager also ensures that projects are aligned with established IT standards and strategies. Program Managers also establish and communicate goals and direct team activities; build relationships with day to day clients; and may have oversight responsibilities for team contributors.
Responsible for the end-to-end management of (large scale) general ledger, group consolidation & regulatory reporting IT projects and programs.
Monitor and manage the critical path, contingencies, scope changes and budget, both labor and non-labor resources.
Responsible for project plans, milestones, measures, budgets, team and stakeholder communication, resource and time management.
Defines and establishes appropriate governance structures and processes to drive the program/project.
Forms and manages teams by organizing resources and skills effectively against tasks.
Identify and manage risks and issues within the project and ataprogram level, and escalate appropriately.
Establish / operate within the governance (decision-making) structure for the program/project.
Posted by Travel at 10:34 AM0comments
Is looking for reverse mortgage and is still in doubt about the best place, know that your doubts as to the http://www.allrmc.com finished you will have the most qualified service reverse_mortgage_calculator.php at your disposal,These loans, which allow seniors to spend their home equity without selling their home, have historically been cumbersome and expensive. But new options now empower seniors to tap smaller amounts of equity inamore affordable way A reverse mortgage, or more often called as senior reverse mortgage, isaloan used to release home equity in the property inasingle lump sum, regular monthly advances, oracredit amount. The borrower’s responsibility to settle the loan is deferred until he or she dies, moves out to age care oradifferent home, or sells the house. The equity ofaproperty is on top of the initial loan, and if the value of the house were to depreciate, then there would be more debt than the initial amount borrowed.One does not need to haveagood credit standing, savings in the bank, orasteady income. The main requirement is that the loan be taken using one’s primary assets. There is alsoaminimum age requirement wherein the older the applicant, the higher the probable amount of loan to be given by the loaners ,Welcome to www.allrmc.com and you will get free .pdf guide "introduction to reverse mortgages" , then from that point you already know what the right place to have all the information you need about reverse mortgage, come to
Posted by Travel at 10:30 AM0comments
(FULL TIME) SAP GL Senior Director in Jersey City NJ
Location: Jersey City NJ.
Salary @ $175k.Client will requests salary statements for the past3yrs.
Required experience and skills/knowledge include:
Expert IT business analysis experience in SAP general ledger in the financial services industry
IT General Ledger implementation experience in the financial services industry
Group consolidation/regulatory reporting experience
Extensive experience in managing IT applications/projects (5 or more years)
Business Analysis or Project Management certification (CBAP/PMI etc) is highly desirable.
Ability to think strategically, negotiate & influence
Strong work ethics, detail oriented and good interpersonal skills
Manage virtual teams and work in matrixed organizations
Ability to liaise with senior technology managers and finance stakeholders.
Excellent communication skills and good analytical problem solving skills; Ability to effectively work with clients and vendors inamulti-cultural, smart sourced environment.
The Manager within Finance IT playsavital role in ensuring all technology solutions are delivered successfully. Manager oversees the business & functional capabilities of the SAP General Ledger in alignment with the business and IT strategy.
A key objective of this role is to bridge the gap between the client's requirements and the technical delivery team and help to successfully deliver projects within this diverse and challenging space.:
Subject matter expert for SAP General Ledger and all related processes for finance IT
Overall accountable for changes to SAP general ledger for the Americas region.
Perform upfront an assessment on any new programs/projects and agree the objectives of the program/project with all involved Stakeholders
Builds and maintains strong relationship with clients (in the business) to ensure alignment with client needs, requirements and project management support, as needed.
Deliver quality solutions by employing business analysis best practices and functional domain knowledge.
Posted by Travel at 10:24 AM0comments
Could tourism becomeaPandora box for Myanmar?
By Luc Citrinot, eTN | Nov 29, 2011
BAGAN (Myanmar), eTN- Imagineayoung and beautiful girl. Looking at the mirro for the first time, she suddenly discovers how pretty she is. She has then two choices: nurturing and enhancing her inner natural beauty. Or just use her power of seduction to attract anyone. Myanmar looks like this young girl in front of the mirror. Over 50 years of isolation has preserved the genuine beauty of its people and its landscapes. With its will to open up to tourism, the country however acknowledges the risks it might take. "We can destroy our social fabric just for the sake of tourism development. We have to be very careful on our future strategies," explained Ohn Thwin, Assistant Hotel Manager of the Aureum Palace Hotel in Bagan, the venue to Myanmar first international tourism event, GMS Travel Leaders' Symposium on Sustainable Tourism.
After three days of debates and workshop, there was unanimity among the 100 participants. Myanmar's political and economic isolation has beenablessing in disguise. "With Myanmar, we are experiencing one of the most exciting events in Asian tourism today. Opening Myanmar is to let travelers discovering one of the most fabulous destinations on the continent and still completely unspoilt. With its rich cultures, its amazing natural and historical heritage, its mountains or its coastline, Myanmar has all the ingredients to turn intoamajor world destination. Plus an unbeatable plus over some other countries: its authenticity," told Mason Florence, Executive Director of the Mekong Tourism Coordinating Office, the driving force behind the event with Myanmar Ministry of Hotels and Tourism and Myanmar Tourism Board.
Over the last two days, the Symposium looked at examples of sustainable tourism in the Greater Mekong Sub-region, especially with the empowerment of communities in the development of tourism products. Over the last 12 to 15 years, community-based initiatives have blossomed not only in Thailand but also in Vietnam, Cambodia or Laos with home-stay programs, agricultural or fishing tourism as well as craft tourism. "It is one of the best way to help alleviating poverty for local population. Providing support and facilitate cooperation among stakeholders from grassroots to international levels can then be done in order to strengthen the capacity of communities to manage tourism sustainably," explained Pradech Phayakvichien from Thailand Community-Based Tourism Institute.
There isaserious concern for Myanmar to avoid mistakes done by some of its neighbours. "We realize that quick tourism growth goes often on pair withadilution of our cultural heritage fromahuman or fromalandscape point of view. We will go step by step, going from 300,000 air arrivals to 400,000 then to 500,000. Our government is conscious that will be the way to prevent an over-commercialization of our assets and the destruction of our social and cultural fabric," said Htay Aung, Deputy Minister for Myanmar Ministry of Hotels and Tourism during the symposium.
Most participants could not agree more. They fully endorse the government's initiative to publishatourism masterplan and to make sure that future developers will abide to the rules. "Zoning isakey to tourism. State overnance is incredibly important to respect the fragile balance of eco-tourism and cultural tourism. It can also answer toagrowing demand of travellers for sustainable tourism products," highlighted Pradech Phayakvichien. "business community is the one who can invest into the country but this is true that they will not regulate themselves. This is then to the government to create the right balance to the benefits of all," indicated PATA CEO Martin Craigs.
Myanmar hopes to also receive the support of international institutions. For more than two decades, the Asian Development Bank has accompanied the development of the Greater Mekong Sub-region and is likely to playapro-active role in Myanmar tourism quest, once political and economic sanctions are loosen up. According to Htay Aung, informal talks between Myanmar Ministry of Culture and UNESCO are already set to take place by next month to see in which way the country could preventacommercial and physical deterioration of its heritage. Another major issue will be he training of people to high quality tourism standards. "There is no institute for tourism so far. This is an urgent issue we must address quickly if we don't want to be left along the way," added Mr. Htay Aung.
Although the government is likely to simplify visa procedures inanear future and open up more cross-border points, Myanmar's government seems to be conscious that they will be limits if they want to nurture the country's authentic appeal.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/4FVktc2z-nAJ.
Posted by Travel at 9:56 AM 1 comments
ငွေလဲကောင်တာတွင် နိုင်ငံခြားငွေများ စုပြုံနေ
နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ခွင့်ရတဲ့ ဘဏ်အချို့မှာ နိုင်ငံခြားငွေတွေ စုပြုံနေသလို နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်း ဆက်တိုက် ကျဆင်းနေတာကြောင့် အရှုံးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ငွေလဲကောင်တာ ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ ဘဏ်အချို့မှ သိရပါတယ်။ 'လာပြန်ဝယ်တဲ့သူထက် ရောင်းတဲ့သူက ပိုများတော့ ကောင်တာမှာ မြန်မာငွေ မလောက်ဘဲ နိုင်ငံခြားငွေတွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ များလာတယ်၊ ဈေးကလဲ တဖြည်းဖြည်းကျလာတော့ နိုင်ငံခြားငွေ အများကြီး လက်ထဲမှာရှိရင် အများကြီးပိုရှုံးတာပေါ့' လို့ နိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာ ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုမှ လက်ထောက်မန်နေဂျာက ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ဈေးကျနေတဲ့အတွက် ငွေလဲကောင်တာတွေမှာ ပိုပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင် တချို့ကလည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ပြင်ပ မှောင်ခိုငွေလဲနေရာတွေမှာ လိမ်လည်ခံရတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ငွေလဲကောင်တာတွေမှာ လဲတဲ့သူတွေ ပိုများလာနေတယ်။ ငွေလဲကောင်တာမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဝယ်တဲ့သူထက် ရောင်းတဲ့သူတွေ ပိုများတဲ့အတွက် ကောင်တာ စောပိတ်ရတာတွေလည်း ဖြစ်လာတယ်။ ငွေလဲကောင်တာတွေ စဖွင့်တဲ့အချိန်က တစ်ဒေါ်လာကို ကျပ် ၈၀၀ နဲ့ဝယ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု တစ်ဒေါ်လာကို ၇၈၀ ဝန်းကျင်နဲ့သာ ဝယ်ယူတော့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ 'နေ့တိုင်း ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရတာ၊ အခုနောက်ပိုင်း ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ အရောင်းအဝယ် လုပ်တာတောင် လာရောင်းတဲ့သူက မလျော့ဘူး၊ ငွေလဲကောင်တာ ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ ဘဏ်တွေအားလုံး ကန့်သတ်ချက်က အတူတူပဲ' လို့ စီဘီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာ တရားဝင် ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ဘဏ် ၁၇ ဘဏ်ဟာ နေ့စဉ် ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ သိမ်ဖြူငွေလဲကောင်တာ စဖွင့်စဉ်က တင်းကျပ်မှု သိပ်မရှိပေမဲ့ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားငွေကြေး အရောင်းအဝယ် လာလုပ်တဲ့အခါ ပြည်တွင်းပြည်ပ အထောက်အထားမျိုးစုံနဲ့ ကန့်သတ်ပြီး ပမာဏတစ်ခုအတွင်းသာ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ အခု ဘဏ်တွေမှာ နိုင်ငံခြားငွေပမာဏ များများရှိနေတဲ့အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကိုလည်း စဉ်းစားကြတယ်လို့ နိုင်ငံခြားငွေလဲကောင်တာ ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ ဘဏ်အချို့ထံမှ သိရကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ကုမုဒြာ ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/NqO3DSlo1RoJ.
Posted by Travel at 9:51 AM0comments
မြန်မာ့လေကြောင်းက ခရီးစဉ်သစ်လေးခု တိုးချဲ့ပျံမည်
မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးစဉ်သစ်လေးခု တိုးချဲ့ပျံသန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်များ အနေဖြင့် မော်လမြိုင်-ကော့သောင်း ခရီးစဉ်၊ ဟုမ္မလင်း-မုံရွာ၊ မုံရွာ-ကလေး ခရီးစဉ်၊ လားရှိုး-တာချီလိတ် ခရီးစဉ်တို့ဖြစ်ကာ ယခုလအတွင်း ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်ပြီဆိုရင် မြန်မာ့လေကြောင်းက ခရီးစဉ်သစ်တွေ တိုးချဲ့ပျံသန်းပေးပါတယ်။ ခရီးသွား အနည်းစုသာ သွားလာတဲ့ ဒေသတွေလဲ ပျံသန်းပေးနေပါတယ်" ဟု အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ ဦးထွန်းတင့်အေးက ပြောသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်များအားလုံးကို ခရီးသည်ရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ နေ့စဉ်ပျံသန်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "အခုတိုးလိုက်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာဆိုရင် မုံရွာကနေသွားမယ့် ခရီးသွားတွေက အရင်ကလို မန္တလေးကနေတစ်ဆင့် သွားနေစရာမလိုတော့ဘူး။ နောက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်က မြို့နှစ်မြို့ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ပျံသန်းပေးလိုက်တာတွေက ခရီးသွားတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်" ဟု ခရီးသွားပြည်သူ ဦးထင်အောင်က ပြောသည်။ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် လေယာဉ်လက်မှတ်များကို အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်ရန်နှင့် လေကြောင်းလိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တင်ရန်လည်း စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် ATR 72, ATR 42, MA 60 နှင့် F28 လေယာဉ်အမျိုးအစား အစင်းရေ ကိုးစင်းတို့ဖြင့် မြို့ပေါင်း ၂၅ မြို့သို့ ပျံသန်းပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Flower News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသ်ည။ "
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/jh0WHQ5lQpgJ.
Posted by Travel at 9:49 AM0comments
Re: ပုဂံလေဆိပ်၌ ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/75cyA1tglfQJ.
Thank you, Myo Myanmar. They should rather rephrase "tourism promotion board" or something else like that. It seems totally unfit with the word. Sigh.... I'm not havingaclear understanding on what the experts in tourism have been doing in this regards. If they love Myanmar and her benefit, they should speak out in NO TIME.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/IW2-yh_7DFoJ.
Re: Digest for travelmyanmar@googlegroups.com - 13 Messages in7Topics
I went up to Shwedagon pagoda with my clients
yesterday evening (28.11.2011).I was wearing national jacket(not
uniform color ),not wearing uniform Longyi.
I saw some people sitting at small table who represent for Ministry of
Hotel and Tourism .No body asked to me anything about .
I have no idea why they are there and what is for .
On 11/28/11, travelmyanmar@googlegroups.com
> - မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင် [1 Update]
> - Myanmar tourism entersanew era [1 Update]
> - myanmar post journal အား ပြန်လည်ရှင်းလင်းထောက်ပြ [2 Updates]
> - နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေလွယ်ကူရေးကော်မတီကမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်နည်း [3
> - ယခုနှစ်တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်သို့ ပြည်တွင်းဧည့်သည် တစ်သိန်းနှင့်
> နို... [2 Updates]
> - ကျိုက်ထီးရိုးခရီး [3 Updates]
> - What is the Right? [1 Update]
> Topic: မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင်
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/ee654f35bdbb7a38
> From: kyukyu tun <kyukyu26@gmail.com>
> Date: Nov 28 10:24AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6edf87300f4246fa
> မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင်
> အကြွေးဝယ်ကတ် (Credit Card) စနစ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်
> စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော
> မြန်မာနိုင်ငံ၌ Online မှပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာသုံး VISA
> Card ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Web Host Myanmar ကုမ္ပဏီ၏
> မန်နေဂျာဦးလွင်မျိုးက ပြောပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း
> ကျင်းပခဲ့သည့် ICT ပြပွဲတွင် စတင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ
> ကတ်အရေအတွက် ရာဂဏန်းပမာဏနီးပါး အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆက်လက်
> ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီကတ်နဲ့ ပြည်ပကနေ Domain တွေ၊ Hosting တွေ၊ Skype
> ငွေဖြည့်တာ စတဲ့ Online Payment တွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရတယ်။
> အစိုင်အခဲပစ္စည်းတွေကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဝယ်လို့မရသေးဘူး" ဟု
> မန်နေဂျာ ဦးလွင်မျိုးက ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါကတ်သည် နိုင်ငံတကာ၏
> မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ငွေထုတ်ယူနိုင်ပြီး မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို Online
> မှတစ်ဆင့် ယင်းကတ်ဖြင့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၌
> Online မှ တစ်ဆင့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင် Visa, Master, Paypal အစရှိသော
> ကတ်များကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း စင်ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသားတစ်ဦးက
> ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ယင်း VISA Card ဖြင့်
> အသုံးပြုနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ Website များတွင် လွယ်ကူစွာ
> ဈေးဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကတ်ဝယ်ယူပြီးလျှင် ကတ်အစစ်ကို အပြင်သို့
> ထုတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ ကတ်နံပါတ်၊ CCV Code, Expire Date တို့ကို
> info@webhostmm.net မှတစ်ဆင့် ကတ်ဝယ်ယူသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့
> ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Online VISA Card လျှောက်ထားလိုပါက သုံးရက်မှ
> ငါးရက်အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးလွင်မျိုးထံမှ သိရှိရသည်။ အဆိုပါ
> VISA Card ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ရန် စင်ကာပူနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရှိ
> ဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်း(Bank Account) တစ်ခုစီ ဖွင့်ထားပြီး
> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ VISA Card ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီဖြင့်
> ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ၄င်းကထပ်လောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်
> နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
> Topic: Myanmar tourism entersanew era
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/99a2652defce22b7
> From: "Nyi Nyi ®" <nyinyi@gmail.com>
> Date: Nov 27 11:04PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/2629f7649281926d
> By Luc Citrinot, eTN | Nov 26, 2011
> YANGON/BAGAN (Myanmar),eTN- Experts have for long predicted that Myanmar
> (ex Burma) would one day open up and turn into Southeast Asia's hottest
> destinations. The prediction failed to materialize for many years due to
> the country's political image. But since the transfer of power from the
> military to the first civil government following elections in November
> 2010, positive signs multiply aboutareal will to open the country to the
> rest of the world. The State Peace Development Council (SPDC) which ruled
> the country for over two decades was officially dissolved. In February
> 2011,acivil government took over with ex General Thein Sein sworn in as
> President of the renamed "Republic of the Union of Myanmar" along with the
> two Vice Presidents. The secretive Senior General Than Shwe (78 years old)
> also stepped aside and is now officially retired.
> These are more than just cosmetic changes. In the streets of Yangon, the
> economic capital, there is some freedom in the air. "We can today discuss
> politics and criticize the government. This would have been impossible
> before. We hope that it will last," saysagroup of young students who
> learn English inacrumbling old colonial building in Central Yangon.
> Pictures of Aung San Suu Kyi can be seen on posters all over the city. More
> encouraging, official newspapers report regularly about the leader of the
> National League for Democracy. Changes are also in the air in people's
> daily life. First ATMs are now available in Yangon and Mandalay –although
> only for locals-, licences have been provided to private change companies
> while the government just allow the import of new cars and busses for the
> public network.
> All those signs clearly indicate that Myanmar's government is now keen to
> open up its economic and becomeamore democratic society. This is a
> historical u-turn which is certainly motivated by the fact that the country
> has been left behind while other countries in Asia embraced modernity and
> wealth. The military- who ruled the country for over halfacentury-
> acknowledge that attracting investors and modernize infrastructures will
> not happen without the necessary political move.
> In return, the world starts to recognize Myanmar's efforts. First steps are
> being made to lift up its status of banned nation. " Hillary Clinton will
> come to visit Myanmar on December 1 and 2,ahistoric moment for Myanmar.
> This would have been unconceivableafew months ago," describes Gerard
> Delmonte, General Manager of the Strand Hotel, the only five-star
> historical hotel in Yangon. The Association of Southeast Asian Nations
> (ASEAN) also officially approved Myanmar chairmanship of the grouping in
> 2014-afirst also for the Association. ASEAN handed over the Diplomatic
> Prize to the country during the recent Bali summit. Another important event
> will also take place in 2013 when Myanmar will host the Southeast Asian
> Games (SEA Games).
> Political and economic reforms will de facto createanew impetus in the
> tourism sector. The boycott of the destination –in place for many decades-
> is fading away with tourists are now keen to visit one of Southeast Asian
> tourism's last frontiers. In 2010, Myanmar welcomed 792,000 travelers,
> including 297,000 visiting Yangon. This year, this number should reach
> between 870,000 and 900,000. "It is certain that the country could reach
> rapidly the million travelers. Issues however need to be rapidly resolved
> such as insufficient hotel capacities or visa facilitation. Yangon could
> turn intoagreat short-stay destination for Asian and expatriates if visa
> procedures are simplified," indicates Mr. Delmonte. The Minister of Hotels
> and Tourism is very much aware of the necessity to open up the country: "We
> will otherwise be left behind the Greater Mekong Subregion development,"
> recognizes Htay Aung, Deputy Minister for the Ministry of Hotels and
> It is then the right time for the Mekong Tourism Coordinating Office –
> which groups the six countries from the Greater Mekong Subregion- to
> organize in partnership with the Ministry of Hotels and Tourism the first
> international travel trade event in Myanmar. As Myanmar opens up its doors
> to foreign travelers, some 100 participants, including many international
> experts, will gather in the old historical city of Bagan on November 27th
> to discuss sustainable tourism. Bagan isaspectacular venue: it is one of
> Asia's most amazing archeological sites with over 2,500 stupas and temples
> spreading around the old city.
> Tour operators, hoteliers, international organizations and government
> officials from the Greater Mekong Sub-region and around the world will
> debate the country's tourism strong selling points but will also look at
> ways to manage the challenge of rapid growth. "Myanmar isafantastic
> destination for its cultural and natural assets. And its wonderful
> population still gives authentic hospitality to visitors," tells Mason
> Florence, Executive Director of the MTCO. "Myanmar will be Asia next
> fabulous destination for visitors who prefer to travel independently, and
> payapremium over joining traditional tour groups. These travelers like to
> experience and interact atadeeper level with the local culture, heritage
> and local people," he adds.
> True: Myanmar is seen as Asia's most promising destinations over the decade
> to come. The biggest challenge will be to make sure that the country does
> not go the way of rampant commercialization over the years to come as it
> opens up to international tourism. "There isarisk of it but we hope that
> the government will understand this issue. We have for example beautiful
> old heritage buildings in Yangon,atrue asset to the city if they are used
> wisely", says Dr. Nuai Aye Aye Wai, Director of the Emerald Sea Resort in
> Ngwe Saung Beach but also an architect. The Strand hotel has for example
> launched its first packages for heritage and antique shop tours through
> Newly-elected CEO of the Pacific Asia Travel Association Martin Craigs
> indicates also the association's willingness to help Myanmar on his path to
>asustainable tourism future. In Bagan, PATA CEO and Deputy Minister for
> Hotels and Tourism jointly announced the formation of the first PATA
> chapter for Myanmar. A definitive sense of normalization...
> See Original post
> Topic: myanmar post journal အား ပြန်လည်ရှင်းလင်းထောက်ပြ
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/4408e23fcae93950
> From: Thant Zaw <goldenmdyts@gmail.com>
> Date: Nov 27 11:26AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/e7359bcdb2a7f094
> လေးစားအပ်ပါသော ဧည့်လမ်းညွှန်များ ခင်ဗျား
> မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်မှ ပြောကြားချက်အရ အင်အားသုံး စေခိုင်းခံရခြင်းကြောင့်
> ဧည့်လမ်းညွှန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအမှားများကို ဖေါ်
> ပြခဲ့သည်ဆိုခြင်းကို လက်မခံနိုင်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ခွင့်အတွက်
> ကြိုးစားနေကြသော သတင်းမီဒီယာတစ်ခုအနေဖြင့် အထက်ပါ အကြောင်းပြချက်သည်
> မည်သို့မျှ ခိုင်လုံမှု မရှိကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားသည်
> ဆိုသော်လည်း သတင်းသမားများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျင့်ဝတ်များရှိသည်ကို
> အစစ်အမှန် သတင်းမီဒီယာသမားများ သိကြပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုကို
> ထိခိုက်စေနိုင်သော အများပြည်သူ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသော
> သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလျက် ထည့်သွင်းဖေါ် ပြခြင်း၊ အတင်းအကျပ်
> စေခိုင်းသောကြောင့် ထည့်ရပါသည် ဟု အကြောင်းပြခြင်းသည် မြန်မာပို့စ်
> ဂျာနယ်၏ အဆင့်အတန်း ရပ်တည်ချက်ကို ဖေါ် ပြနေကြောင်း ဝေဖန်လိုပါတယ်။
> Date: Nov 27 09:32PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/c23f8b561fa6a242
> ဆောင်းပါးရှင်အကြောင်းလဲသိလိုပါတယ်ခင်ဗျား။- -
> Topic: နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေလွယ်ကူရေးကော်မတီကမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်နည်း
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/2d5f8acf04c46c04
> ---------- 1 of3----------
> From: TUN tourguide <tuntourguide@gmail.com>
> Date: Nov 27 10:19AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6f0d76e29fcef7f2
> ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Human Resources ကို
> အစိုးရ လူတွေ အကြောင်းတော့ပြောမနေနဲ့ ....အရည်အချင်းမပြည့်ရတဲ့ အထဲ
> ဦးနှောက်ကို ချုပ်ထားခံနေရသေးတာကိုး
> အဲဒီတော့ ..ဘာကော်မတီလုပ်လုပ် ...ခါးတောင်းကြိုက်တခြား ဖင်တလွဲ ဖြစ်နေမှာပဲ...
> အခုပိုဆိုးတယ်...နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေချောမွေ့ စေရေးကော်မတီတဲ
>့ ...အဆင်မပြေတဲ့ အပြင် ပိုတောင်ဆိုးလာတယ်...
> သူတို့ ထဲ က ဘယ်သူက နိုင်ငံခြားသားကို ဘိုလို ဆက်ဆံနိုင်မှာလဲ
> ဘယ်သူက Guide အလုပ်ကို စစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ
> ရုပ်ပြအလုပ်တွေ ......ခပ်ညံ့ညံ့တွေ ပါဗျာ....
> 2011/11/27 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
> ----------2of3----------
> From: khin thidar <gorose.myanmar@gmail.com>
> Date: Nov 27 05:16AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6f6572098f83a7e4
> ဒီနေ. ရွှေတိဂုံ ဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်မှာ Uniform မ၀တ်တဲ.Guide တွေ
> အပေါ်မတက်ရဘဲ ပြန်လွှတ်တယ်လို. သတင်းကြားရပါတယ် သင်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ.
> သတင်းမှန်မမှန် စုံစမ်းကြပါဦး
> ----------3of3----------
> From: Thatoe ThuZarAung <thatoe.thuzaraung@googlemail.com>
> Date: Nov 27 04:18AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/483fe9d3d32a8d48
> အရင်ကဗျုရိုကရက်ယန္တယားကြီးကိုအသက်သွင်းနေတာပဲလို့မြင်ပါတယ်။ ( like like
> like ...........)
> Topic: ယခုနှစ်တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်သို့ ပြည်တွင်းဧည့်သည်
> တစ်သိန်းနှင့် နို...
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/b5cedcd8e87e4b6f
> Date: Nov 27 10:13AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/db77aeb30ad3a198
> အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေချောမွေ့ စေရေး
> ကော်မတီဆိုတာ ဘယ်ရောက်နေလဲ
> ကားပေါ်အိပ်ရတဲ့ ဧည့်သည်တွေ ကို ဘယ်သကောင့်သားက အဆင်ပြေပါရဲ့ လားသွားမေးလဲ
> သတိပြုကြပါ လူကြီးမင်းတို့ ..... ကြိုးနီ အပြုအမူ၊ ဒီမိုကရေစီ ကို
> ဘာမှန်းမသိတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အာဏာတသွေးတသံတမိန့် စစ်တပ်အကျင့်အကြံ တွေ နဲ့ 
> tourism ရဲ့service minded ယဉ်ကျေးမှု က လုံးဝကို ဖီလာဆန့် ကျင်ပါတယ်....
> ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဒီပလိုမေစီ နဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေ ဦးဆောင်မှ
> ဟိုတယ်ကိုလည်း Hotel Chain ခေါ်တဲ့ပညာရှင်တွေ လုပ်မှ အဆင်ပြေပါမယ်....
> တပ်ထွက် က ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ပြီး
> ဇါတ်ပျက်မင်းသမီးကို ဟိုတယ်ဒါရိုက်တာ လုပ်ခိုင်းရင် ဘယ်တော့မှ proper
> ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး
> ပညာရှင်ကို တန်ဖိုးထားရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီ
> 2011/11/26 Frankie Nyi Nyi <nyinyi@gmail.com>
> Date: Nov 27 05:37AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/c070c0a5846a0940
> နိုင်ငံခြားသားများအဆင်ပြေချောမွေ.စေရေး စာလုံးလေးကသိပ်ကိုလှတာဘဲနော်
> ဒီပလိုမေစီ သိပ်ရှိတာဘဲ
> အဲဒီ ကော်မတီက Uniform မ၀တ်တဲ. Guide ကို ဘုရားပေါ် မတက်ရရင်
> သူ.ဧည်.သည်တွေက ဘယ်လိုအဆင်ပြေချောမွေ.စွာနဲ. ဘုရားပတ်ကြမှာပါလိမ်.
> ကြည်.ရတာ ဘုရားGuide အလုပ်ရအောင် ထွင်ပြန်ပြီထင်တယ် ၂၀၀၆ တုံးက ဂေါပက
> နဲ. အခု ????????????
> Topic: ကျိုက်ထီးရိုးခရီး
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/95b331e1f752c9ba
> From: Khin Hpone Yin <khinhponeyin@gmail.com>
> Date: Nov 27 03:44PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/29c24728a19345cf
> 2011/11/25 Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
> From: yin min htun <mr.yinminhtun@gmail.com>
> Date: Nov 27 10:42AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/20abfb4ebf0f9d6c
> Dear Emerald,
> Thanksalot for your information, if possible, I think you should
> mention the restaurant name and hotel name( MOUNTAIN TOP)
> I had the same problem in MOUNTAIN TOP too. If there isaroom for guide
> (G1,G2,G3 and G4 (sharing room), I think they should.
> From: nwe ni175 <nweni175@gmail.com>
> Date: Nov 27 06:31PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/2fe309e06e1a0c47
> ကတင်ထားပေးတာကFOC room ပါ။အရင်ရောက်တဲ့အမျိုးသားGuideများတော့နေရာရကြပါတယ်။
> 2011/11/27 Khin Hpone Yin <khinhponeyin@gmail.com>
> Topic: What is the Right?
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/3db550f3e28bc8a2
> Date: Nov 27 11:29AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/8ba9b0ed94175dcb
> ကျွန်တော်မနေ့ကairport arrival မှာ ဧည်သည်ကြိုပြီး
> ကျွန်တော်နောက်မှတန်းစီခိုင်းလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်ဧည့်သည်passport
> ရယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သူမ၏အလှည့်သို့ေ၇ာက်သောအခါသူမကpassport နှင့််စင်ကာပူ
> ဒေါ်လာအချို့ကိုKBZ ကောင်တာအပေါက်ထဲသို့ထည့်လိုက်ပါသည်။ KBZ
> ရင်သီးစွာပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဂိုက်တွေဂိုက်လိုင်စင်နှင့်
> အဲ့ဒါwithout Right လို့ပြောရင်ရနိုင်မလားခင်ဗျာ၊
Re: မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင်
ဟုတ်ကဲ့ ကိုညီေ၇ ကျွန်တော် ဒီသတင်းကို ဖတ်တာ လေးခေါက်လောက်ရှိပါပြီ။ VOICE ထဲပါထဲက အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖတ်ပြီး နားမလည်လွန်းလို့ပါ။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင် အကြွေးဝယ်ကတ် (Credit Card) စနစ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်
စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၌ Online မှပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာသုံး VISA
Card ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Web Host Myanmar ကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာဦးလွင်မျိုးက ပြောပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ VISA ကဒ် အသုံးပြုနိုင် လို့ ပြောတာလား... နိုင်ငံတကာက VISA ကဒ် ကိုမြန်မာပြည်မှာ သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာလား ဘာကိုဆိုလိုမှန်းကိုမသိလို့ပါ။
၂။ ဒီကတ်နဲ့ ပြည်ပကနေ Domain တွေ၊ Hosting တွေ၊ Skype ငွေဖြည့်တာ စတဲ့ Online Payment တွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရတယ်။
အစိုင်အခဲပစ္စည်းတွေကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဝယ်လို့မရသေးဘူး
အဲ့လိုဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားက ဟိုတယ်ကို ကြိုပြီး ဘိုကင်ချိတ်တယ်။ Credit Card NO. တောင်းတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကော ဒီကဒ်ကိုသုံးလို့ရလား။ ဒိုမိန်း၊ ဟိုစတင်။ နဲ့ စကိုက်ပီအတွက်ပဲလား။
၃။ VISA Card ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ရန် စင်ကာပူနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရှိ ဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်း(Bank Account) တစ်ခုစီ ဖွင့်ထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ VISA Card ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း
ဒီကဒ်ထဲကို ငွေထည့်ဖို့ ကျတော့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာသုံး VISA Card စတင်အသုံးပြုနိုင် ဆိုတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ အောက်က သတင်းရဲ့ ဆိုလိုရင်းကလွဲနေတယ်လို့ ထင်လို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ VISA, MASTER, American Express, ကဒ်တွေသာအသုံးပြုလို့ရ၇င်တော့ Tourist တွေအတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
2011/11/28 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
အရင်က Serge Pun & Associates (SPA) Group က ဝန်ဆောင်မှုပေးဘူးတယ်။ မှတ်မိသူတွေမှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ထဲကငွေကိုထုတ်ပေးတာ။ ဝန်ဆောင်ခ ၃%လား ၄%လားမမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့တရားမဝင်လို့ဆိုပြီးရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတယ်။ အာဆီယံဥက္ကဌအဖြစ် ၂၀၁၄မှာယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကို ၂၀၁၄ မတိုင်ခင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ် (ဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်) လို့ယူဆပါတယ်။
စကားမစပ် ဒီသတင်းဖိုင်လေးကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ Macquarie University ကမြန်မာပြည်ကိုအထူးပြုပြီးအနှစ်နှစ်ဆယ်လေ့လာထားတဲ့Sean Turnell နဲ့ရိုက်တာသတင်းဌာနက Tara Joseph တို့အင်တာဗျူးထားတာလေး။ မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အချက်တွေနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမြန်မာပြည်အတွက်တကယ့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့တကယ့်အခွင့်ကောင်းဖြစ်တယ်
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/guP29ZY2uTIJ.
Fwd: အရေးကြီးလို.ဖတ်ကြပါ Guide Passport တွင် ဖြည်.ရမည်.အချက်များ
From: Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 01:01:03 -0800
Subject: Fwd:အရေးကြီးလို.ဖတ်ကြပါ Guide Passport တွင် ဖြည်.ရမည်.အချက်များ
Cc: MYANMARTOURISMHITTAING <MYANMARTOURISMHITTAING@googlegroups.com>
From: new world <newworld.cyber1@gmail.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 14:27:55 +0630
To: "emerald.twentyfive" <emerald.twentyfive@gmail.com>
ယနေ.ကျွန်မ Smart Card သွားထုတ်ပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းမှ ပေးလိုက်သေါ
လိုက်နာရမည်.သတ်မှတ်ချက်များမှာ ဧည်.လမ်းညွှန်များအား အလုပ် မများ
များအောင် နှင်. ကြိုးနီစနစ် အတိုင်း ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေသော မဆလစံနစ်
ယန္တရားများအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဖေါ်ဆောင်နေသေါ အရေးယူခြင်းခံရမည် ဆိုသည်.
စကားလုံးများကို ထပ်ခါတလဲလဲ သုံးစွဲထားသေါ စည်းရုံးရေး အသွင်မဆောင်သေါ
အမိန်.စာ တစောင်သါဖြစ်သည် ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ထို.အပြင် Smart Card ထုတ်ကြမည် ဆိုစဉ်က CEC ဟောင်းများ သဘောတူ
ဆုံးဖြတ်ထားချက်မှာ MTGA အား ငွေသွင်းသည်.Date နှင်. Refresher Course
တက်သည်.Date နှင်.သါ Smart Card နံပါတ် များပေးရမည်ဆိုပြီး ပူးတွဲပါ
စာရင်းအတိုင်း နံပါတ်များထုတ်ပေးရန် နေပြည်တော်သို. ကျွန်မတို.ကိုယ်တိုင်
နေပြည်တော်မှလည်း Smart Card အားလုံးစီပြီးကာမှ CEC ထဲတွင် မပါသေါ
ပြင်သစ်Guide တယေါက်မှ နေပြည်တော်သို. လုပ်အားပေးသွားစဉ် ထုံးစံအတိုင်း
ဆရာကြီး ဆရာမကြီးဇာတ်လမ်းပြန်စကာ ဆရာမကြီးများကို ၁ မှ ၁၀ အထိ
နံပါတ်များပေးရန်ဆိုကာ နဂိုစီထားသေါ ကဒ် ၁၀ ခုအား ပြန်ဖျက်ပြီး ထို
နံပါတ်၁၀ ခုအား ၁၂၀ ကျော်သို.ပို.လိုက်ပါသည်။( No 1 to 10 move to No 121
to 130 )
Smart Card နံပါတ် အရေးကြီးသဖြင်.ပြောနေရခြင်း မဟုတ်ပါ။ CEC
ဆုံးဖြတ်ချက်များအား မလေးစားဘဲ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ထင်ရာစိုင်းနေခြင်းကို
ဒီနေ.တမျိုးပြော နောက်တနေ. တမျိုးပြင် ပါးစပ်ထဲ ရှိသမျှ
ဗျာဒိတ်ဖြစ်နေလျှင်တော. ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ. ဟိုနိုင်ငံဖြစ်သွားပါလိမ်.မည်။
သို.ရာတွင် ကျွန်မအနေဖြင်.မူ ထိုသို. အရေးမကြီးသော ကိစ္စလေးတောင်မှ
အနစ်နာမခံနှိုင်သော သူများအား မည်ကဲ.သို.ယုံကြည်ကိုးစားရမည် မသိတော.ပါ။
Roster System များ စလျှင် လဒ်စားလိုက်ကြမည်.ဖြစ်ချင်း
"အမြန်ဆုံး သတငိးပို့ပါဥပဒေကြောင်းအ၇ အခမဲ့ အကူအညီပေးပါသည်"
Legal Aid Project ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသက်(၁၈)နှစ်အောက်ရှိ
ပြစ်မှုကျူးလွန်စော်ကားခံရသော ကလေးသူငယ်များ၊ လူငယ်များနှင့် သက်သေများ၊
ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ကလေးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များ၊
အသက်(၁၈)နှစ်ကျော်သော်လည်း အမျိုးသမီး ဖြစ်သည့် အတွက်
ပြစ်မှုကျူးလွန်စော်ကားခံရသော () အမျိုးသမီးများအတွက်
အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခ (ရှေ့နေခ) တစ်စုံတစ်ရာ မယူဘဲ ဥပဒေအကြောင်းအရ အခမဲ့
ကူညီပေးသည့် စီမံချက် ဖြစ်ပါသည်။
- မသိနားမလည်၍သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံးစရိတ် မတတ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊
- ရှေ့နေငှားရမ်းခ မတတ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိနစ်နာသောအမှုကို
တိုင်းတန်းရန် (သို့) စွပ်စွဲခံရသောအမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲ
ရှိသူများအတွက် ဥပဒေအကြောင်းအရ အခမဲ့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရန်
- ပြစ်မှုကျူးလွန်စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) အသက် (၁၈)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်၊
- အသက် (၁၈)နှစ် အောက် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်များအား ကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲရှိပါက
- ပြစ်မှုကျူးလွန် စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) များအား ဆေးကုသစရိတ်နှင့်
တရားရုံးသို့ သွားလာစရိတ်နှင့် တရားရုံးသို့ သွားလာစရိတ် အခက်အခဲရှိပါက
- ပြစ်မှုကျူးလွန် စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) အား
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါက အ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
- Legal Aid Project အောက်တွင် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ရှေ့နေများအား
ရှေ့နေခ ၊ ခရီးစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ စာရွက်စာတမ်းခများကို အမှုသည်များက
- ရှေ့နေများမှ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ တောင်းခံလာပါက စီမံကိန်းမန်နေဂျာထံတွင်
 အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးများ၊ လူငယ်များ ပြစ်မှုကျူးလွန်စော်ကားခံရလျှင်
 အသက် (၁၈)နှစ်အောက် ကလေးများ၊ လူငယ်များ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း
စွပ်စွဲခံရ၍ တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရလျှင်
 အသက်(၁၈)နှစ်ကျော်သော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်သည့်အတွက်
အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူအညီပေးပါသည်။
အမှတ်(၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ်၊ အခန်း(ခ)၊ ဂလိုဘယ်တာဝါ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်
ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဒေါင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Htet Nyi Nyi Swe
Posted by Travel at 1:18 AM0comments
Fwd:အရေးကြီးလို.ဖတ်ကြပါ Guide Passport တွင် ဖြည်.ရမည်.အချက်များ
Date: Tue, 29 Nov 2011 14:27:43 +0630
Posted by Travel at 1:08 AM0comments
မကြူ ကြူ ....
ဧည်.လမ်းညွှန်တွေ ဘက်မှာ MTGA အသင်း တရားဝင်ရှိပါတယ် ။ MTGA ကနေ
အတွင်းရေးမှူးလက်မှတ်နဲ. တရားဝင် ကန်.ကွက်စာပို.လို.ရပါတယ် ။
ဒီကိစ္စ အတွက် တွေ.ဆုံတယ်ဆိုတာကောင်းပေမယ်. MTGA ရဲ. အားကို တရားဝင်ယူပြီး
မှန်ကန်စွာ တုန်.ပြန်ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ် ။
MTGA ဥက္ကဌ ။ အတွင်းရေးမှူး များမှလည်း နှာစေးမနေပဲ ၀င်ရောက်ဖြေ
On 11/28/11, kyukyu tun <kyukyu26@gmail.com> wrote:
> ၂၆.၁၁.၂၀၁၁ နေ့လည် ၂း၃၀ မှ ၃း၃၀ အချိန်ထိ ဧည့်လမ်းညွှန် ၂ ဦးမှ Modern
> myanmar post journal ၌ပါရှိသော ဆောင်းပါးရှင် ဆုမွန်ရေးသားသည့်
> "အကျင့်ပျက် ဧည့်လမ်းညွှန်များအား ထိရောက်စွာအရေးယူတော့မည်" ဟူသော
> အရေးအသားနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းရေးသားဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို
> ယင်းကဲ့သို့ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမှာလည်း ဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း( MTGA)
> နှင့်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲ ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေသောကြောင့်
> မိမိတို့ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ဖြင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံရှင်းလင်း
> ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေသော အရေးအသားများဖော်ပြပါရှိသည့်
> journal အားမည့်သည့်အဖွဲ့အစည်းမျှ
> ၀င်ရောက်ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဧည့်လမ်းညွှန်များမှ
> အစည်းအဝေးကျင်းပရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
> ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်း ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ တွေ့ဆုံပွဲကို
> ခန်းမတစ်ခု၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Travel at 10:45 PM0comments
Re: myanmar post journal အား ပြန်လည်ရှင်းလင်းထောက်ပြ
ဂျာနယ်မှာဘာတွေ ရေးထားလဲ မဖတ်ရသေးတော. comment မပေး တတ် သေး ဘူး။
သိရသလောက် တော. တော် တော် ဆိုးပုံရပါတယ် ။ ကိုဝင်းဇော်ဦးဖတိကြည်.ပြီး
ဂိုဒ်တွေကို တော် တော် စော် ကားထားရင်တော. MTGA letter head
အတွင်းရေးမှူး လက်မှတ်နဲ. တရားဝင်ကန်းကွက်စာ ပို.လို.ရပါတယ် ။
ဂိုဒ်တွေဘက်ကဘာမှ ပြန်လုပ်လို.မရဘူးဆိုတာ မမှန်ပါဘူး ။
နောက်ဆုံးအဆင်.အနေနဲ. MTGA က နေ ဂျာနယ်ကို တရားစွဲလို.ရပါတယ် ။
On 11/28/11, renzo tour <renzotour@googlemail.com> wrote:
> You are right, so they need say pardon on their journal.If they don't
> say nothing we need to claim them on other paper.
> On 11/27/11, winzaw oo5 <winzawoo5@gmail.com> wrote:
>> ဆောင်းပါးရှင်အကြောင်းလဲသိလိုပါတယ်ခင်ဗျား။- -
>> On 11/27/11, Thant Zaw <goldenmdyts@gmail.com> wrote:
>>> လေးစားအပ်ပါသော ဧည့်လမ်းညွှန်များ ခင်ဗျား
>>> မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်မှ ပြောကြားချက်အရ အင်အားသုံး စေခိုင်းခံရခြင်းကြောင့်
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအမှားများကို ဖေါ်
>>> ပြခဲ့သည်ဆိုခြင်းကို လက်မခံနိုင်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ခွင့်အတွက်
>>> ကြိုးစားနေကြသော သတင်းမီဒီယာတစ်ခုအနေဖြင့် အထက်ပါ အကြောင်းပြချက်သည်
>>> မည်သို့မျှ ခိုင်လုံမှု မရှိကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားသည်
>>> ဆိုသော်လည်း သတင်းသမားများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျင့်ဝတ်များရှိသည်ကို
>>> အစစ်အမှန် သတင်းမီဒီယာသမားများ သိကြပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုကို
>>> ထိခိုက်စေနိုင်သော အများပြည်သူ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသော
>>> သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလျက် ထည့်သွင်းဖေါ် ပြခြင်း၊ အတင်းအကျပ်
>>> စေခိုင်းသောကြောင့် ထည့်ရပါသည် ဟု အကြောင်းပြခြင်းသည် မြန်မာပို့စ်
>>> ဂျာနယ်၏ အဆင့်အတန်း ရပ်တည်ချက်ကို ဖေါ် ပြနေကြောင်း ဝေဖန်လိုပါတယ်။
>>> On 11/23/11, Naing K Z <konai.burma@gmail.com> wrote:
>>>> ၂၂.၁၁.၂၀၁၁ ရက် နေ့လည် ၁၂း၃၀ မှ ၃း၃၀ အချိန်ထိ
>>>> ၁။ ကိုနိုင်ကျော်ဇေယျ
>>>> ၂။ ကိုဝဏ္ဏကျော်
>>>> ၃။ ကိုမင်းဆွေ
>>>> ၄။ ကိုတင်မောင်မောင်
>>>> ၅။ မ၀င်းခိုင်ထွန်း
>>>> ၆။ မခင်မာထွန်း ပေါင်း(၆) ဦးမှ myanmar post journalist
>>>> များဖြစ်သော ကိုဇော်မင်းနိုင်အပါအ၀င် နောက်တစ်ဦးကို
>>>> ရန်ကင်းစင်တာ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
>>>> ဤသို့တွေ့ဆုံရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ နိုဝင်ဘာ
>>>> တတိယပတ်ထုတ် myanmar post journal ၌ပါသော
>>>> ဆောင်းပါးရှင် ဆုမွန်ရေးသားသည့် "အကျင့်ပျက်
>>>> ဧည့်လမ်းညွှန်များအား ထိရောက်စွာအရေးယူတော့မည်"
>>>> ဟူသော အရေးအသားနှင့်ပတ်သက်၍
>>>> ယင်းဆောင်းပါးမှာလည်း by force ဖြင့် journal ၌
>>>> ဖော်ပြပေးရန် စေခိုင်းခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း journalist
>>>> များမှ ပြန်လည်ရှင်းပြပါသည်။
>>>> ယင်းကဲ့သို့ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမှာလည်း ဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း(
>>>> MTGA) နှင့်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲ ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏
>>>> ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေသောကြောင့် မိမိတို့ ပုဂ္ဂလိက
>>>> ခံစားချက်ဖြင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံရှင်းလင်း
>>>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>>>> Burma)" group.
Posted by Travel at 9:50 PM0comments
ကျွန်တော်ပုဂံဟိုတယ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ Agenda စာရွက်တွေကို
ဓါတ်ပုံရိုက်လာတာပါ။ အဲဒီအဖွဲ့က နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု
အဆင်ပြေရေးကော်မတီ၏ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာ တွေကို
သေသေချာချာများဖတ်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ စားသောက်ပွဲ၊ ဂေါက်ရိုက်ပွဲတွေနဲ့
နေရာယူထားပြီး နိုင်ငံခြားသားများ ဘယ်လိုအဆင်ပြေမယ်အောင် စီစဉ်တဲ့
On 11/27/11, Thatoe ThuZarAung <thatoe.thuzaraung@googlemail.com> wrote:
> On Nov 27, 12:49 am, Nyi Nyi ® <nyi...@gmail.com> wrote:
>> ဟုတ်ပါတယ် အခုနေရာတော်တော်များများမှာ May I help you အစား May I Help
>> လို့ပြောင်းထားပါတယ်။ တစ်ခါက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Tourist Unit
>> ကိုသောင်းရေ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရှဲပါဦးဗျာ။
>> May I help you ကရောချလို့ရမယ်။ May I help Tourist ဆိုတော့.. အင်း ..
>> စဉ်းစားစရာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ tourism
>> လုပ်တော့လုပ်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်သလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပဲ
>> ပြောရတော့မယ်။ tourism
>> ရဲကရဲအလုပ်၊ လဝက က လဝကအလုပ်ရယ်လို့မရှိတော့ပဲ
>> (တစ်ဌာနကနေတစ်ဌာနဘောလီဘောမပုတ်ပဲ) နဲ့လုပ်ပေးနိုင်မှဖြစ်မယ့်သဘောရှိပါတယ်။
>> နိုင်ငံခြားသားများ အဆင်ပြေလွယ်ကူရေးကော်မတီလို့ပြောရင် ဒီလိုအစိုးရဌာနတွေ၊
>> ဥပမာ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊
>> စသဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲလို့မေးချင်ပါတယ်။
>> ဒီနေရာမှာ နည်းပညာအကူအညီတွေလည်းလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ
>> ဒါဆိုမလိုအပ်ပဲ ခရီးကြန့်ကြာတာမျိုးတွေရှောင်ရှားနိုင်မယ်။ ဒါဆို
>> ဝင်/ထွက်သွားလာနိုင်မယ်။ paper work တွေလျော့လာမယ်။ accuracy မြင့်လာမယ်။
>> ကြားတာပြောပါ့မယ် (ကြားတာပါ) ထိုင်းနိုင်ငံက ဝန်ကြီးတစ်ယောက်
>> တာချီလိပ်ပေါက်ကဝင်လာပြီးကျိုင်းတုံလည်ပါသတဲ့။ ပြန်ထွက်တဲ့ရက်မှသိသွားလို့
>> မလုပ်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာကောင်းကောင်းပေး။
>> ပညာရှင်တွေမွေးထုတ်။ မကောင်းဘူးလား။
>> သကြားအုပ်ထားတာလား၊ တကယ်လုပ်တာလားဆိုတာမရှင်းပါဘူး။ တကယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်
>> tourism ဆိုတာ သစ်လုပ်ငန်း၊
>> (အလုပ်လက်မဲ့နုန်းလျော့ချနိုင်တာ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုကုစားနိုင်တာ)
Posted by Travel at 9:37 PM0comments
'' မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ပြများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာ၊ စိန်ခေါ်မှုနှင့်
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၏ အခွင့်အလမ်းများ ''
Date : 3rd December (Saturday)
Venue : UMFCCI (Head Office), No(29), Min Ye` KyawSwar Street, LanmadawTsp , Yangon.
Posted by Travel at 9:11 PM0comments